Ihe Mere Ndị Mmadụ Ji Hụ Dọkas n’Anya
GỤỌ NKE Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gun Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Isoko Italian Japanese Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Maya Mongolian Myanmar Norwegian Ossetian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sepedi Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tajiki Tetun Dili Thai Tigrinya Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Zulu
ANYỊ niile chọrọ ka ndị mmadụ hụ anyị n’anya. Ọ̀ bụ na ị chọghị ka ndị mmadụ hụ gị n’anya?— * Baịbụl kọọrọ anyị banyere otu nwaanyị aha ya bụ Dọkas, bụ́ onye ọtụtụ ndị hụrụ n’anya.
Dọkas bi na Jọpa, bụ́ obodo dị n’akụkụ Oké Osimiri Mediterenian. Jọpa dị naanị ihe dị ka kilomita iri ise na isii ma e si Jeruselem gawa ya. Dọkas bụ otu n’ime ndị mbụ soro ụzọ Jizọs.
Gịnị ka i chere mere ọtụtụ ndị ji hụ Dọkas n’anya?— Baịbụl kwuru na nwaanyị ahụ mere ọtụtụ ihe ọma, nyekwa ndị mmadụ onyinye mara mma. O nwere ike ịbụ na ọ kwaara ụmụ nwaanyị ndị di ha nwụrụ uwe. Ọ kọkwaara ọtụtụ ndị banyere ezi Chineke, bụ́ Jehova, dị nnọọ ka Jizọs mere.
Ị̀ maara ihe ọjọọ meziri Dọkas?— Ọ rịwara ọrịa, mechaa nwụọ. Ọnwụ ya wutere ndị enyi ya niile. Ha wee dunye ụfọdụ ndị ka ha gaa zie Pita onyeozi ka ọ bịa ngwa ngwa. N’oge ahụ, ebe Pita nọ dị ihe dị ka kilomita iri na isii ma e si Jọpa gawa ya. Mgbe Pita rutere, ọ gbagooro n’ọnụ ụlọ nke dị n’elu bụ́ ebe ozu Dọkas dị. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị nọ n’ebe ahụ na-ebe ákwá, ha gosikwara Pita uwe dị iche iche Dọkas kwaara ha.
Pita gwaziri mmadụ niile nọ n’ọnụ ụlọ ahụ ka ha pụọ. E nweela mgbe Pita na ndịozi ndị ọzọ rụrụ ọrụ ebube dị iche iche, ma o nwebeghị onye n’ime ha kpọlitere onye nwụrụ anwụ. Gịnị ka i chere Pita meziri?—
Pita gburu ikpere n’ala n’akụkụ ozu Dọkas ma kpegara Jehova ekpere. Mgbe o kpechara ekpere, ọ gwara Dọkas ka o bilie. Dọkas wee bilie! Pita jidere Dọkas n’aka ma selite ya. Pita kpọziri ụmụ nwaanyị ndị ahụ di ha nwụrụ nakwa ndị ọzọ ma gosi ha Dọkas. Weregodị ya na ị nọ n’ebe ahụ, olee otú i chere obi dị ha?—
Ka anyị chegodị echiche ihe anyị nwere ike ịmụta n’akụkọ mbilite n’ọnwụ Dọkas. Otu ihe ọ na-akụzi bụ na ọ bụrụ na ị na-enyere ndị ọzọ aka, ọtụtụ n’ime ha ga-ahụ gị anya. Nke ka nke bụ na Chineke ga-echeta gị, ọ ga-ahụkwa gị n’anya. Ọ gaghị echefu ihe ọma ị na-emere ndị ọzọ. Ọ ga-enyekwa gị ndụ ebighị ebi, bụ́ mgbe ị ga-adị ndụ obi ụtọ n’ụwa ọhụrụ ya.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ihe Mere Ndị Mmadụ Ji Hụ Dọkas n’Anya